स्वास्थ्य Archives - पब्लिक पाेष्ट
August 1, 2019 August 2, 2019 EP EDITORLeaveaComment on स्तनपान सप्ताह सुरु, ­ आमा र शिशु दुवैलाई फाइदा
काठमाडौँ। शिशुलाई जन्मेको दुई वर्षसम्म आमाको दूध ख्वाउन सल्लाह दिने डा. लक्ष्मी लामिछाने (नाम परिवर्तन)ले आफ्नो शिशुलाई भने जन्मेको दुई महिनासम्म मात्र स्तनपान गराउनुभयो । पढाइ सकेर भर्खर मात्र काम थाल्नुभएकी लामिछानेले आफू चिकित्सक भएका कारण शिशुलाई स्तनपान गराउन समस्या भएको बताउनुहुन्छ । अस्पतालमा कहिले राति त कहिले ४८ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने भएकाले सुरुको दुई […]
काठमाडौं ।प्राय मानिसले आफ्नो दैनिकीकाे सुरुवात चियाको चुस्की सँगै गर्ने गर्छन्। बिहानको समयमा मात्र हाेइन दिउँसो वा वेलुकी पनि चिया अनिवार्य खानै पर्ने खालका मानिस पनि हुन्छन्। अझ दुधको चियानै खानु पर्ने खालका मानिस झन् धेरै देखिन्छन्। कही साथीभाइ भेट्ने वित्तिकै चिया खाने त नेपालीको संस्कारसँगै जोडिएको हुन्छ। चियामा मानव शरिरलाई असर गर्ने खालका बिभिन्न […]
रायोको साग खानुका फाइदै फाइदा…
July 21, 2019 EP EDITORLeaveaComment on रायोको साग खानुका फाइदै फाइदा…
काठमाडौ । रायोको सागमा भिटामिन–ए प्रशस्त पाइने भएकाले यसले रतन्धोलगायत रोगबाट केटाकेटीलाई बचाउँछ । – रुघा लागेमा रायोको दाना पिसेर यसलाई महमा मिसाई सुँघ्नाले सञ्चो हुन्छ । – पाचनशक्ति कमजोर छ भने रायोको दाना पिसेर यसलाई तरकारीमा हालेर हप्तादिनजति खानाले पाचनशक्ति बलियो बन्दै जान्छ । यसो गर्नाले भोक नलाग्ने समस्या पनि हटेर जान्छ । – […]
वर्षायाममा कस्तो मेकअप गर्ने ? हेर्नुस् मेकअप टिप्स…
July 15, 2019 EP EDITORLeaveaComment on वर्षायाममा कस्तो मेकअप गर्ने ? हेर्नुस् मेकअप टिप्स…
काठमाडौ । सुहाउँदो मेकअपले सुन्दरतामा थप निखार ल्याउँछ । मौसमअनुसार छालाको प्रकृति पनि बदलिने भएकाले सुन्दरतामा ध्यान पु-याउनुपर्ने हुन्छ । समयअनुसार मेकअप गर्न सकेमा स्वस्थ र सुन्दर रहन सकिन्छ । वर्षायाममा जुनसुकै किसिमको छालामा पनि मेकअप गर्न सजिलो हुँदैन । छाला धेरै सुक्खा हुने, तैलीय हुने, धुवाँ–धुलो बढी हुने, पसिना आउने तथा पानीले भिजाउनेजस्ता कारणले […]
July 11, 2019 EP EDITORLeaveaComment on तौल घटाउन चाहानुहुन्छ ? यसरी पिउनुपर्छ पानी..
काठमाडौ । बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा एक–डेढ गिलास पानी पिउने। यसले वजन घटाउन मद्दत गर्नुका साथै दिमागमा प्रर्याप्त उर्जा दिन्छ। जसका कारण दिनभर सक्रीय हुन सहयोग मिल्छ। चिया वा कफी खानुभन्दा अगाडि आधा वा एक गिलास पानी पिउनै पर्छ। यसले शरिमा एसिडको असर र वजनलाई नियन्त्रण गर्छ। नास्ता गर्नु भन्दा करिब एक घण्टा अगाडि […]
स्वस्थ रहन गर्मीमा कस्तो खाना खाने ?
July 7, 2019 EP EDITORLeaveaComment on स्वस्थ रहन गर्मीमा कस्तो खाना खाने ?
काठमाडौँ । जाडोको तुलनामा गर्मी मौसम रोगका लागि जोखिम मानिन्छ। विशेषगरी छालाजन्य तथा पेटजन्य रोगका लागि। स्वस्थ रहन व्यायाम जस्तै खानाको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। यदि खाना स्वस्थ भएन भने सिधै पाचनप्रणालीमा असर गर्छ। नियमित खानामा बढी मसला, पिरो र चिल्लो हुनुहुँदैन। तरकारी भने प्रशस्त मात्रामा खान सकिन्छ। आँपजस्ता बढी क्यालोरी भएका फलफूल धेरै खानुहुुँदैन। […]
मानिसलाई एकदिनमा कति प्रोटिन जरुरी ? यी हुन् प्रोटिनका भण्डार
July 6, 2019 EP EDITORLeaveaComment on मानिसलाई एकदिनमा कति प्रोटिन जरुरी ? यी हुन् प्रोटिनका भण्डार
काठमाण्डौ । प्रोटिन मानिसको स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण तत्व हो। यसले शरीरको कोशिका निर्माण र मर्मतमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। यो हरेक उमेरका मानिसलाई आवश्यक हुन्छ। गर्भावस्थामा प्रोटिन बढी आवश्यक हुन्छ। शिशुको निर्माण प्रक्रियामा पनि यसको अहम् भूमिका हुन्छ। मानिसको पूरै जीवनमा प्रोटिन धेरथोर आवश्यक भइरहन्छ। यसैले हाम्रो खानामा पनि कुनै न कुनै प्रोटिनजन्य खाद्यपदार्थ सामेल […]
कलेजो कसरी सफा गर्ने, यी हुन् ११ खानेकुरा
July 6, 2019 EP EDITORLeaveaComment on कलेजो कसरी सफा गर्ने, यी हुन् ११ खानेकुरा
प्याज– प्याजमा लिभर इन्जाइमलाई सक्रिय बनाउने क्षमता हुन्छ, जसले शरीरमा भएका विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ। यसमा अधिकमात्रामा हुने अलाइसिन र सेलेनियम नामक दुईवटा प्राकृतिक तत्वले कलेजोलाई सफा पार्छन्। अंगुर– अंगुरमा भिटामिन सि र एन्टिअक्सिडेन्ट उच्च मात्रामा पाइन्छ, जसले कलेजोलाई प्राकृतिक रुपमा सफा पार्छ। एक गिलास अंगुरको रसले कलेजोलाई विषाक्तमुक्त गर्ने इन्जाइम उत्पादनमा सहयोग […]
भिटामिन डि के हो ? भिटामिन डिको कमी भएमा के गर्ने ?
July 5, 2019 July 6, 2019 EP EDITORLeaveaComment on भिटामिन डि के हो ? भिटामिन डिको कमी भएमा के गर्ने ?
काठमाडौ । भिटामिन डि हाम्रो शरीरको लागि अत्यावस्यक भिटामिनहरु मध्ये एक हो । भिटामिन डि को मुख्य स्रोत भनेको सूर्यको किरण नै हो। सूर्यको किरणमा भएको अल्ट्रा भायोलेट किरणको मद्धतले हाम्रो छालाले भिटामिन डि बनाउँछ। यसको अर्को स्रोत भनेको माछा, अण्डा, दूध , च्याउ, कोड लिवर तेल आदि खानेकुरा हुन्। बदलिदो समयसँगै आजकल घाममा बस्न […]
गर्मिमा नरिवलको पानी सेवनगरी छालाको सौन्दर्य बढाउनुस्
July 4, 2019 July 4, 2019 EP EDITORLeaveaComment on गर्मिमा नरिवलको पानी सेवनगरी छालाको सौन्दर्य बढाउनुस्
काठमाडौ । गर्मी महिना शुरु भएको छ। गर्मी महिनामा आफ्नो हात र शरिरका विभिन्न अंगको सफाईमा ध्यान दिनु पर्छ । गर्मिमा आवश्यकता अनुसार कमसेकम ३ देखि ५ लिटरसम्म पानी पिउनै पर्छ । गर्मी मौसममा डिहाइड्रेसन, भोक नलाग्नु र धेरै पसिना आउने कारण शरिरको तापक्रम साधारण हुँदैन ।यसले थुप्रै रोगको सम्भावना बढ्ने गर्दछ । यो स्थितीबाट बच्नका […]